लमहीमा महिला राष्ट्रिय प्रतियोगितामा लुम्बिनी र एपिएफको बिजयी सुरुवात - Goraksha Online
दाङ, ११ पुस । प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेश र सशस्त्र प्रहरीको विभागीय महिला टिमले जितको सुरुवात गरेका छन् । दाङको लमहीस्थित राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको उद्घाटन खेलमा लुम्बिनी प्रदेशको महिला टिमले प्रदेश नं. २ को टिमलाई ९ विकेटले पराजित गर्दै बिजयी सुरुवात गरेको हो ।
टस जितेर पहिले बलिङ रोजेको लुम्बिनी प्रदेश टिमले २ नम्वर प्रदेश टिमलाई ७७ रनमा रोक्न सफल भएको हो । ७८ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा लुम्बिनी प्रदेशले १६ दशमलव १ ओभरमा १ बिकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गरेको थियो । लुम्बिनीलाई जित दिलाउन ओपनर गीता गोसाई र सरस्वती घर्तीमगरले ४२ रनको साझेदारी खेल्दै बिजय नजिक पु¥याएका थिए ।
२२ रनको व्यक्तिगत स्कोरमा सरस्वती आउट भएपछि लुम्बिनी प्रदेश महिला टिम क्याप्टेन नेरी थापा र गीताले टिमलाई जित दिलाए । जसमा गीताले २३ र नेरीले १६ रनको योगदान दिएका थिए । खेलमा २ नम्वर प्रदेशलाई रोक्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेशकी खेलाडी सुस्मिता भुसालले ४ ओभर वलिङ गर्दै ३ विकेट लिन सफल भएकी थिइन् ।
निर्धारित २० ओभरको खेलमा ७ विकेट गुमाउँदै २ नम्वर प्रदेश टिम ७७ रन मात्र बनाउन सफल भएको थियो । उसका लागि ओपनर सना प्रविन र अनु चौधरीले सर्वाधिक २१–२१ रन बनाए भने विमला मगरले १० रन बनाइन् । उक्त खेलमा उत्कृष्ट बलिङ गर्ने लुम्बिनी प्रदेशकी सुस्मिता भुसाल प्लेयर अफ द म्याच घोषित भएकी थिइन् ।
त्यस्तै दोश्रो खेलमा विभागीय टिम एपिएफले कर्णाली प्रदेशलाई २ सय ४ रनको अन्तरले हराउँदै बिजयी भएको छ । टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपिएफले २० ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै २ सय ३५ रन बनाएको थियो । जसमा एपिएफकी कप्तान सीता रानामगरले सर्वाधिक ६८ रनको योगदान दिएकी थिइन् । उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको एपिएफले पहिलो विकेटका लागि ९७ रनको साझेदारी गरेको थियो ।
जसमा ज्योति पाण्डेले ३२ रन बनाएर आउट भएकी थिइन् । दोस्रो विकेटका लागि सीता र उपकप्तान सरिता मगरले ९९ रनको साझेदारी गर्दै टिमलाई १ सय ९६ रन बनाउन सफल भएका थिए । सीताले ५९ बलमा ६८ रन बनाएकी थिइन् । एपिएफलाई जिताउन सरिताले ४४, इन्दु बर्माले २२ र ममता चौधरीले २ रनको योगदान दिएका थिए । २ सय ३६ रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउने क्रममा कर्णाली प्रदेशको टिम १४ दशमलव १ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै ३१ रनमा आउट भएको थियो ।
उसका कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् । १ रनमा पहिलो विकेट गुमाएको कर्णालीले लगातार विकेट गुमायो । कर्णालीका प्रदेशका पाँचजना खेलाडीले खाता खोल्न सकेनन् । कर्णाली प्रदेश टिमकी कप्तान लक्ष्मी रिमालले सर्वाधिक ९ रन बनाइन् । कर्णालीलाई हराउने क्रममा एपिएफकी खेलाडी करुणा भण्डारीले ५ र राजमती ऐरीले २ विकेट लिएकी थिइन् ।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका खेल संयोजक दुर्गा थापामगरको अध्यक्षतामा भएको खेलको लमही नगरपालिका नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले उद्घाटन गरेका थिए । क्रिकेट संघ दाङका अध्यक्ष प्रदीप मजगैयाँको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको प्रतियोगिताको सहजीकरण क्यानका प्रदेश सदस्य किशोरचन्द्र गौतमले गरेका थिए ।
प्रतियोगिताको दोश्रो दिन आइतवार पहिलो खेल लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको महिला टिम र दोश्रो खेल सशस्त्र प्रहरीको विभागीय टिम एपिएफ र प्रदेश नं. २ का बीच हुने भएको छ ।
रोल्पामा प्रथम परिवर्तन तेक्वान्दो आईटिएफ राष्ट्रिय प्रतियोगिता